activity » Random of Nang Nyi
ဒီနေ့ ၃၁ ရက် ၈ လ.. ကမ္ဘာ့ ဘလော့များနေ့..
တစ်ခုခုရေးမယ်လို့ ကြံစည်ထားပေမယ့် အလုပ်တွေက တော်တော်မအားနေတာနဲ့ ဘာမှမရေးဖြစ်ဘူး..
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရတွေအနေနဲ့ အရင်တုန်းက ၂၀၀၉ တုန်းက ပြည် သရေခေတ္တရာကို မြန်မာဘလော့ဂါတွေစုပြီး လေ့လာရေးသွားခဲ့တုန်းက အကြောင်းကို ပြန်သတိရတယ်.. အဲ့တုန်းက တင်ထားတဲ့ပို့စ်က hosting ပျက်ပြီး မရှိတော့တာနဲ့ ခု သိမ်းထားတဲ့နေရာကနေရှာပြီး ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်.. အမှတ်တရ..
အဲ့တုန်းက MBS အဖွဲ့အနေနဲ့သွားကြတာ.. လေ့လာရေးကပြန်လာပြီး ပို့စ်ရေးရင် အကောင်းဆုံး ၃ ယောက်ကို ဆုပေးမယ် ဘာမယ်နဲ့ ပြောသေးတယ်.. ဘာဆုမှလည်း မပေးပါဘူး.. =D
အိုခေ.. အင်ထရိုတွေများနေပြီ .. သရေခေတ္တရာခရီးစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဆက်ဖတ်ကြပါဦး.. (ဓာတ်ပုံတွေတော့ မပါတော့တာ စိတ်မကောင်းဘူး).. တချို့ဟာတွေတော့ ဒီမှာ ကြည့်လို့ရဦးမယ်.. enjoy !!
Share Tweet Posted by NangNyi at 11:23 am
ပထမဆုံးပွဲတဲ့.. မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေအသင်း Myanmar Fashion Designer Group.. အဲ့က ဒီဇိုင်နာတွေစုပြီး ဖက်ရှင်ပြပွဲလုပ်တာ.. MFDG ဆိုတာကို လိုဂိုလုပ်ရေးထားတဲ့ စာလုံးဒီဇိုင်းကို MiDG လို့ချည်း ဖတ်ဖတ်မိနေတာ..း(
မင်းဓမ္မနားက MCC ခန်းမမှာဆိုတော့ ဝေးလို့ မသွားဘူးဆိုပြီး နေနေရင်းက နောက်တော့ ကိုရဲအောင်သူ၊ ကိုဘိုဘို၊ ကိုငြိမ်းချမ်းနိုင်တို့ ဓာတ်ပုံဆရာ ၃ ယောက်စလုံးက သွားဖြစ်တော့ ကပ်လိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်.. (ဒါမျိုးပွဲ မကြည့်ဖူးသေးလို့ သွားရင်လိုက်မယ်လို့တော့ နဂိုကတည်းက ဂျီကျထားတာ)..
ပွဲက ၄ နာရီစတယ်ပြောတယ်.. ကိုယ်တို့ ဟိုကိုရောက်တော့ Continue reading »
Share Tweet Posted by NangNyi at 11:09 pm
NUAC Degree Art Show
စိတ္တံဒန္တံ သုခါဝဟံ တဲ့..
ယဉ်ကျေးအောင် ဆုံးမထားသော စိတ်သည် ချမ်းသာခြင်းကို ဆောင်၏ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ နီတိစကားပါ.. အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ ကျောင်းတံဆိပ်မှာ ပါတဲ့ စာသားလေး.. သဘောကျမိပါတယ်..
အဲ့ဒိတက္ကသိုလ်ရဲ့ ၁၅ ကြိမ်မြောက် ကျောင်းဆင်းပွဲကို ၂၉.၈.၂၀၁၁ မှာ ရန်ကုန်မြို့ မြို့မကျောင်းလမ်းမှာ ရှိတဲ့ အမျိုးသားဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပပါတယ်.. ကျောင်းသားဟောင်းတစ်ယောက် အနေနဲ့ ကျောင်းဆင်းပွဲဆိုရင် အမြဲတမ်းနှစ်တိုင်းနီးပါးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဒီပွဲကိုလည်း သွားမယ်လို့ နဂိုကတည်းက အားတင်းထားတာအပြင် ကိုရဲအောင်သူနဲ့ ထူးတေဇာကလည်း ဓာတ်ပုံတွေလိုက်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ ပိုသေချာသွားပြီး ကိုယ့်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ညီရှားနဲ့ လှိုင်ဝေလွင်ကို ထပ်ချိန်းပြီး သွားဖြစ်ပါတယ်..
Share Tweet Posted by NangNyi at 1:40 pm
5th Anniversary of Myanmar Bloggers’ Society
Now Now .. MBS is going on5years from 2006..
Asa5th Anniversary and World’s Blog Day, we (MBS members) will gather together..
At first, we want to do some seminar or conference.. but as the weather is not very pleased for us and as we have lack of time.. we postpone that seminar to December.
So.. for now.. the gathering will do..
Some of our core members will collect funding and we’ll print T-shirts with MBS logo and 5th logo and sell it with fair price.. that means 5000 Ks.. =) ..
Place for gathering is still deciding.. we’ll let you know as soon as we know..
cheers guys ! let’s meet up..
We Blog We Unite !!!
Share Tweet Posted by NangNyi at 3:44 pm